IBM waxay ku iibsatay Red Hat $ 34 bilyan. | Laga soo bilaabo Linux
IBM waxay ku iibsatay Red Hat $ 34 bilyan.
Xulka wararka oo dhan | | La cusboonaysiiyay 29/10/2018 22:04 | Noticias
Warka ayaa goor dhow la sii daayay taasi qof walba way ka yaabisay waana inay IBM ku iibsatay Red Hat wax aan ka badnayn 34.000 million dollars.
Sida laga soo xigtay IBM, Bixinta waxaa lagu qiimeeyaa $ 190 saamiga Red Hat. Madaxa shirkadda IBM Ginni Rometty wuxuu u arkaa IBM inuu yahay midka koowaad ee bixiya xalalka daruuraha isku dhafan.
Mashiinnada Ganacsiga Caalamiga ah, ama IBM waa shirkad Mareykan ah oo ku jihaysan aagga sayniska kombuyuutarka.
Shirkaddani waa halyeey ka tirsan aagga teknolojiyada macluumaadka, maadaama ay ka mid tahay kuwa fara ku tiriska ah ee leh taariikh joogto ah oo soo taxnayd qarnigii XNUMXaad.
Red Hat, Inc. waa shirkad Mareykan ah, oo bixisa xalal ku saleysan nidaamka hawlgalka Linux, oo ay ku jiraan Red Hat Enterprise Linux, marka lagu daro xalalka kale ee softiweerka.
Hadda, qiyaasi waxa ka dhalan kara isku darka labadaas shirkadood ... waa hagaag, uma baahnid inaad qiyaasto, taasi durba waxay noqonaysaa mid dhab ah.
1 Ku saabsan iibinta IBM ee Red Hat.
1.1 Red Hat wuxuu sii wadi doonaa inuu u dhaqmo si ka madax banaan IBM
Ku saabsan iibinta IBM ee Red Hat.
La wareegida kadib, Red Hat wuxuu noqon doonaa hay'ad gaar ah kooxda 'IBM Cloud Cloud team'.
Tani waa inay u adeegtaa sidii loo ilaalin lahaa dabeecadda il furan ee Koofiyad Cas.
Tababaraha Red Hat Jim Whitehurst ayaa sii wadi doona hogaaminta qaybta cusub, si toos ah ugu wargalinta madaxa shirkadda IBM Ginni Rometty oo xubin ka ah madaxda sare ee shirkadda IBM. Inta kale kooxda hoggaanka Red Hat way sii joogi doonaan, ayuu yiri IBM.
Guddiyada kormeerka ee labada shirkadood ayaa horey u ansixiyay ganacsiga. Ogolaashaha saamileyda Red Hat ayaa wali maqan.
Ansixinta lagama maarmaanka ah ee ka soo horjeedda kalsoonida iyo hay'adaha xakamaynta ayaa sidoo kale sugaya. IBM waxay rajeyneysaa inay heshiiska dhameystirto bartamaha-2019.
Shirkada IBM waxay gaadhay heshiis ah inay ku bixinayso US $ 190 halkii share Hat, kaas oo waxay ka dhigan tahay wax yar oo ka badan 60% qiimaha saamiyadeeda dhamaadka suuqyada sarrifka Jimcihii la soo dhaafay.
Dhamaan dhaqdhaqaaqan waxaa la qabtay intii lagu jiray usbuucaan.
Red Hat wuxuu sii wadi doonaa inuu u dhaqmo si ka madax banaan IBM
Sidaa darteed, shirkadda softiweerka weyn ee softiweerka waxay hadda noqotaa unug ganacsi oo IBM ah oo ku dhex jira qaybta daruuraha isku dhafan, maaddaama madaxa shirkadda Jim Whitehurst uu ku biiri doono kooxda maareynta IBM.
Ginni Rometty, Madaxweynaha, Madaxweynaha iyo agaasimaha guud ee shirkadda IBM (midig). Jim Whitehurst, Agaasimaha Guud ee Red Hat
War-saxaafadeedkaaga, Red Hat wuxuu yiri waxyaabaha soo socda:
“Ku soo biirida xoogaga ibm waxay na siin doontaa heer baaxad weyn, ilo iyo awoodo si loo dardar galiyo saameynta ilaha furan oo aasaas u ah isbadalka dhijitaalka ah isla markaana keenno koofiyad cas cas dhagaystayaal aad u balaaran, iyadoo la ilaalinayo dhaqankeena gaarka ah iyo ka go aan la’aanta hal-abuurnimo furan «
Red Hat wuxuu sii ahaan doonaa mid madax-bannaan wuxuuna u shaqeyn doonaa sidii qayb ka mid ah kooxda IBM Hybrid Cloud.
Daruur isku dhafan ayaa ah adeeg isku dhafan oo adeegsanaya daruuro, mid u gaar ah iyo mid saddexaad, si loo xalliyo shaqooyinka kala duwan ee urur ka dhex jira.
Adeegga isgaarsiinta pan-yurub Interoute wuxuu tilmaamayaa inay jiraan seddex qaab oo loo hirgaliyo moodooyinka daruur isku dhafan:
Wadashaqeynta udhaxeysa adeeg bixiyaasha daruuraha kaladuwan si loo bixiyo adeegyo isku daraya astaamaha daruuraha guud iyo kuwa gaarka loo leeyahay hal adeeg isku dhafan.
Xirmo isku dhafan oo isku dhafan oo ay bixiso hal adeeg bixiye daruur ah.
Ururada maareynaya daruurahooda gaarka ah ee iyagu qandaraaska ku bixiya adeegga daruuraha dadweynaha oo markii dambe ku dhex daraya kaabayaashooda.
Ginni Rometty, madaxweynaha iyo agaasimaha guud ee shirkadda IBM, ayaa yiri waxyaabaha soo socda:
Lahaanshaha koofiyad cas waa afgambi. tani waxay bedeshaa wax kasta oo suuqa daruurta ku jira. ibm wuxuu noqon doonaa kan ugu horeeya adduunka ee bixiya daruuraha isku jira, iyadoo shirkadaha siineysa xalka kaliya ee daruurta furan ee furi doona qiimaha buuxa ee daruuraha ganacsigooda. "
Jim Whitehurst, Agaasimaha Guud ee Red Hat, ayaa daabacay maqaal ku saabsan mowduuca, isagoo ka hadlaya fursadaha cusub ee u furan labada shirkadood ka socda gudaha IBM oo leh ilo furan iyo sidoo kale qaybta shirkadaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » IBM waxay ku iibsatay Red Hat $ 34 bilyan.
Linus Torvalds wuxuu kumbiyuutarrada uga hadlayaa arrimaha gaarka ah, CoC iyo Linux